यस समयमा गर्भमा आएका बच्चा हुन्छन् निकै भाग्यशाली, कुन हो त त्यो समय ? – Sandesh Press
June 23, 2021 294
काठमाडौँ । संस्कारहरू मध्ये पहिलो, जसमा आत्मा गर्भमा आउँदछ र यसैबाट जीवन र निधनको सिलसिला सुरु हुन्छ।जस कारण यो संसार बिना कुनै अवरोध अगाडि बढ्दै जान्छ। विवाहित जोडी जसले आमा बुबा बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ, उनीहरूका लागि यो भगवानको आशिष जस्तै हो।
Nextहत्केलामा यस्तो चिन्ह भएका व्यक्तिलाई मानिन्छ ‘भगवानका सन्तान’, हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी
के तपाई बाईकमा सवारी गर्दै त हुनुहुन्न? पछाडी बस्नेहरुलाई नयाँ नियम